Isethi yesipho Abakhiqizi | Isethi yesipho seChina Abahlinzeki nefektri
Iphethini Yentwasahlobo Nasehlobo, into Yesipho, Isethi Yokudla Kwansuku Zonke Isethi
Leli qoqo umklamo wethu omusha, i-swan yinto edume kakhulu kulo nyaka. Siyisebenzisa kusethi yokudla kwakusihlwa okungagcini ngokudla kuphela futhi okungahlobisa ikhaya lakho. Le nhlanganisela nayo ithandwa kakhulu emhlabeni.
Le isethi yezipho ezisezingeni eliphakeme enochungechunge lwe-swan ingenza ipuleti, isethi yekhofi, izinkomishi, itiye, inkomishi nesosizi, isitsha sesaladi, ishileyi lamathiyi kanye nekhekhe lokuma nokunye, uma uthanda lesi sitayela kodwa umkhiqizo ohlukile, sicela ukhululeke ukuxhumana ukuze sithole.
Isethi ye-Cactus Dinner edume kakhulu nezinto zesipho
Leli qoqo umklamo wethu omusha, i-cactus yinto edume kakhulu kulo nyaka. Siyisebenzisa kusethi yokudla kwakusihlwa okungagcini ngokudla kuphela futhi okungahlobisa ikhaya lakho. Le nhlanganisela nayo ithandwa kakhulu emhlabeni.
Le setha yekhwalithi ephezulu isethwe ngochungechunge lwe-cactus olungenza ipuleti, isethi yekhofi, izinkomishi, itiye, inkomishi nesosizi, isitsha sesaladi, ishileyi lesilayidi nendawo yokuma ikhekhe njalonjalo, uma uthanda lesi sitayela kodwa umkhiqizo ohlukile, sicela ukhululeke ukuxhumana ukuze sithole.
Leli qoqo umklamo wethu omusha, izakhi zothando ziyinto ethandwa kakhulu kulo nyaka. Siyisebenzisa kusethi yokudla kwakusihlwa okungagcini ngokudla kuphela futhi okungahlobisa ikhaya lakho. Le nhlanganisela nayo ithandwa kakhulu emhlabeni.